Milicsiga Safarkii Madaxweynaha & Madow Ka Sariistii Midnimada Maskaxda Ka Gashay Soomaaliya | Somaliland.Org
Milicsiga Safarkii Madaxweynaha & Madow Ka Sariistii Midnimada Maskaxda Ka Gashay Soomaaliya
March 10, 2013	Abaaro labadii iyo badhkii duhurnimo saacada Magaaladda Hargaysa ayaanu u soo dhaqaaqnay dhinaca garoonka diyaaradaha ee Magaaladda Hargaysa, halkaasi oo uu ka dhoofaayay Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo) oo martiqaad ka helay Raysal Wasaaraha waddanka Turkiga.
Safarka Madaxweynaha ka hor waxa taagnaa arrimo badan oo su’aalo la iska waydiinayay,waxaanay warbaahinta kala gedisan ee Gobolku soo tabinayeen hadalo, ku saabsan qaabka uu noqon doono mustaqbalka ammaan ee Geeska Afrika, iyadoo ay dhaceen isbadalo badan, sida cunaqabatayntii hubka oo laga qaaday dalka Soomaaliya muddo sannad ah, hadalo hanjabaad iyo wadahalba isugu jira oo ka soo yeedhaayay Madaxda ugu saraysa dalkaas Soomaaliya, iyagoo ku cel-celinayay midnimada Somaaliya in loo maraayo wado kasta.
Warbaahinta kala duwan ee Somaliland ayaa ka hor muddo ku sii sugnaa garoonka, si ay u tabiyaan warbixinta Madaxweynaha. Tariikhiyan waxaa lagu tilmaamaa Madaxweynaha Somaliland inuu yahay aftahan hela hadalada, isla markaana wuxuu caan ku ahaa weedho badan oo galay xusuus qorka. Sida xusuus reebkii dagaalkii Burco Duuray ee ahayd “SNM waa wada Lixle”.
Madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku bilaabay warbixin ku saabsan u jeedada safarkiisa, wadahadala uu la yeelan doono Madaxda waddanka Turkiga iyo rajada uu ka qabo arrimahaas. Markii uu dhammeeyay hadalkaas, ayay Saxaafadu waydiisay qaar kamid ah su’aalihii ay u diyariyeen. Waxaase mar qudha dareenka dadka iyo kii Saxaafaddaba soo jiitay Jawaabo uu Madaxweynuhu ka bixiyay, hubka loo fasaxay dalka Soomaaliya, hanjabadaha ka soo yeedha Madaxda waddankaas, iyo nooca wadahadalada ay Somaliland la galayso dalka ay hore u kala baxeen. Weedhihii Madaxwweynaha ee Jawabahaas ayaa u dhignaa.
“Cuna qabataynta hubka ee laga qaaday dalkaas Soomaaliya waa mid aanu aad iyo aad uga xunahay dhibaatada ay noo keenayso, laakiin annagu ma hayno meel ay dawladda Soomaaliya ku tidhi xoog ayaanu ku dhacsanaynaa, xoog ayaanu ku midaynaynaa iyo dagaal ayaanu ku qaadaynaa, sida kale ayay u tidhaahdaa hawlaha wada hadal ayaanu ku dhamaysanaynaa . Anaguna wada hadal dan kama lihin awalba waanu wada hadlaynay, hore ayaanu isugu nimid meel ay dunidu joogto, wadahadal wax kama qabno ee wadahadal loo siman yahay oo ay Somalilland gooni isu taageeda iyo qaranimadeeda ku muujinayso oo ay u cadaynayso cid kastaba.”
Kelmada sida weyn shalay markale dadka xusuusta ugu yeeshay ee Madaxweynaha Somaliland Axmed Silaanyo, waxay ahayd.”Daafacaad haddii ayn noqotana Somaliland way leedahay ciidan ku filan iyo dad ku filan oo xoriyadooda ilaashadda, markii horena Somaliland xoriyadeeda bilaash laguma siine’ xoog ayay kula soo noqotay.”
Hadalkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee uu luuqad adag ugu quus gooyo Madaxweyne Axmed Silaanyo madaxda xukunta dalkaasi Soomaaliya iyo cid kasta oo hunguri ka hayo wiqitanka Qaranka Somaliland, ku waas oo ay Maskaxda ka gashay midow aan jirin, iyagoo ay ka soo yeedhaan hadalo iska hor iyo dabo imanaayay muddooyinkan danbe.
Waxay sidoo kale weedhahani cadayn u ahayeen isla markaana ay madawga ka sareen, cid kasta oo shaki kaga jiray wadahadala ay Somaliland hore ula yeelatay dalkaasi Soomaaliya, mawqifka Madaxweynaha iyo inuu wali yahay Hoggaamiyihii dalka xoreeyay. Dhinaca kale hadalkii Madaxweyne Axmed Silaanyo ee shalay wuxu raad ku reebay rayi caamka bulshada Somaliland, kuwaas oo si weyn ugu falaqaynaayay goobaha laysugu yimaado, waxayna dadku si sarbeeb ah isugu tabinayeen in Madaxweynuhu mujiyay Axmed Silaanyaha dhabta ah ee marka xaladaha adagi yamadaan inuu kan yahay.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo Iyo Weftigiisii Oo si weyn Loogu soo dhaweeyay TurkigaNext PostWasaaradda Warfaafinta Oo Beenisay War Lagu Daabacay Wargeyska Ogaal	Blog